iimbacu - ALinks
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eTshayina?
January 10, 2022 UKaruna Chandna iTshayina, ababaleki
Iofisi ye-UNHCR iseBeijing. Yayisungulwa kwiminyaka ye-1980. Kukho iimbacu e-China ukusukela ngoko. Abantu abafuna indawo yokhuseleko e-China bayaziwa kwaye bakhuselwe ngurhulumente wase-China. Faka isicelo sokukhuselwa: China. Ngokwe-UNHCR,
Ungasifaka njani isicelo sokukhuselwa kwi-UAE? Ukhuseleko lwamazwe ngamazwe kwi-United Arab Emirates
January 10, 2022 UKaruna Chandna ababaleki, UAE
Ukuba uyoyika intshutshiso okanye impatho ekhohlakeleyo kwilizwe lakho, ungafaka isicelo sokhuseleko (indawo yokuhlala). Nantsi ingcaciso emfutshane yendlela yokufaka isicelo sendawo yokufihla intloko okanye ukhuseleko lwamazwe ngamazwe kwi-UAE. Usenza njani isicelo
January 8, 2022 UMaitri Jha Dominikha, ababaleki
Ufuna ukufaka isicelo sendawo yokukhosela eDenmark ke kuya kufuneka ubekhona elizweni. I-Denmark ivulelekile kuye nawuphi na umntu wangaphandle onqwenela ukungenisa isicelo se-asylum. Kodwa awukwazi ukufaka isicelo ukuba ukwilizwe elinye
Ungasifaka njani isicelo sokukhuselwa eAlbania?
January 8, 2022 UKaruna Chandna Alibhaniya, ababaleki
Umbhexeshi ufuna ukuba afumane indawo yokuhlala ukuze abuyela kwilizwe lakhe. Kananjalo nawuphi na umntu ovela kwelinye ilizwe okanye ongenamanani wenza isicelo sokukhuselwa kwiRiphabhlikhi yase-Albania. Kungenxa yokuba
1 2 3 ... 6 I zithuba ezilandelayo»